Iyo MacBook Air ine M1 chip ye959 euros kuApple | Ndinobva mac
Iyo MacBook Air ine M1 chip ye959 euros kuApple
Hongu, zvine musoro isu tiri kutaura nezvazvo chigadzirwa chakadzoreredzwa asi nekambani yeCupertino pachayo uye newarandi yegore rimwe chete. Mazuva ano akadzoreredza Apple makomputa ari kutanga kusvika uye nhasi tinotanga kuona mu webhusaiti yeiyo yakasimba MacBook Air yekutanga neM1 processor.
Mutengo wechikwata ichi che 959 euros i1.129 uye nepo ichiri chokwadi kuti MacBook Air haina kudhura kuitenga iyo nyowani, zvinogara zvichinakidza kukwanisa kuchengetedza mashoma maeuro. Mune ino kesi, iri 170 euros yatinogona kusevha yekutenga kwako.
Ichokwadi kuti mune ino Apple webhu chikamu iwe unowana MacBook Air ine Intel i3 processor yakachipa pane aya ane M1 chip, asi chaizvo rairo yedu kana iwe uchifanira kuenda kune chero wavo ndewe kuzviita neye M1 chip. Ichokwadi kuti ine zvayakanakira nezvayakanakira, asi kwatiri isu chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti gara uchigadziriswa nguva yakawanda sezvinobvira uye mune ino kesi zvichagara zviri nani kutenga iyo yazvino modhi, iri mune ino M1.
Iwo matsva akadzoreredzwa MacBook Pros anga atove kutengeswa pawebhusaiti yeApple maawa mashoma apfuura uye ikozvino Mhepo inosvika. Mac mini ine M1 chip ichave ichiwanikwa munguva pfupi iri kutevera ayo ari ekupedzisira kusvika mune ino dura rewebhu.
Isu tatovaudza kakawanda nzira huru dzezvakanaka nezvakaipa zverudzi urwu rwezvigadzirwa zvakadzoreredzwa neApple, uye kubva pane zvakaitika kwatiri tinogona kutaura kuti ndiyo sarudzo yakanaka kune vazhinji vashandisi uye haina kunaka kune vamwe. Iko kiyi ndeyekuti ive pachena kana iko kuponesa kweanosvika mazana maviri euros kwakakosha. kune aya MacBook Air.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Iyo MacBook Air ine M1 chip ye959 euros kuApple
MacOS Big Sur 11.2.2 yekupedzisira vhezheni yakaburitswa
Apple mutengesi Foxconn anoenda mukugadzira mota